အလင်းရောင်ကြယ်များ: June 2013
တရားအားထုတ်ဘို့ စခန်းခေါ်တာ-ခင်ပွန်းသည်ကရဲစခန်းထင်လို့နှင့် ဂျပန်ကြီးကူညီတဲ့ ကာတွန်း၊၊၊၊၊၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 09:20:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒီပုံလေး မြင်လိုက်ရတော့ ရင်ထဲမှာ ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် ခံစားရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာသူ ဆိုရင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 09:08:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းမလျာ အလှပြိုင်ပွဲ ဗီဒီယို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဒိုင်တွေက အနိုင် ရသူကို လူမှားပြီး ကြေညာ မိရာ ကနေ ဒုတိယ ရတဲ့ သူက အလှ ဘုရင်မ သရဖူ ရရှိ ခဲ့သူကို ဝင်ပြီး နပန်း လုံးခဲ့ တာပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 09:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရှစ်ဦး သေဆုံး လေးဦး ဒဏ်ရာရ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ယာလာပြည် နယ်တွင် ဇွန် ၂၉ ရက်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားသောကြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ရှစ်ဦးသေဆုံးပြီး လေးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 06:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မလေးရှားနိုင်ငံ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများမှ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၂၂၈ ဦး ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 05:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှမ်းလူမျိုး၂ဦးအား KIA အဖွဲမှ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ဗွီဒီယိုဖိုင်
KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်မှတစ်ဦးပေးပို့သော ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လလောက်ကစပြီး တပ်မတော်နဲ့ KIA အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာရင်နယ်မြေအခြေအနေတွေမေးလို့ ပြောရဆိုရတာရှိတယ်၊ တစ်ဖက်မှာလဲ KIA ကရွာသားအချို့ကိုစစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးလို့စွပ်စွဲပြီး သတ်ဖြတ်တာတွေရှိတယ်။ ဒီပုံကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်းက KIA တပ်ရင်း(၆)ရှိတဲ့ ကံဆီးကျေးရွာဘက်မှာ အပြစ်မဲ့ ရှမ်းလူမျိုး ရွာသား ၂ ဦးကိုစစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးလို့စွပ်စွဲပြီး လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ တိရစ္ဆာန်များလို ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ref Branmon
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 04:38:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိခိုက် ဒဏ် ရာရရှိပြီး မ လေးရှားမှပြန်လည်ရောက် ရှိလာသောအမျိုးသားတစ်ဦ;အားရန်ကုန်တွင်ဆေးကုပေးမည်။
Popular Myanmar News Journal ရန်ကုန်-ဇွန်၃၀
တစ်လောက မ လေးရှားနိုင်ငံမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးပြန်လည်ရောက် ရှိလာသောအမျိုးသားတစ်ဦးကို ယနေ့တွင် ဝိတိုရိယ ဆေးရုံတွင်ဦးခေါင်းပိုင်းခွဲစိတ် ကုသမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ် ရာဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသည်။အဆိုပါလူနာကို ဆရာဝန်ကြီးပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်သူက မေတ္တာဖြင့်ဦးဆောင်
ခွဲစိတ်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒနင့်ဝိတိုရိယ ဆေးရုံကြီးကအကုန်ကျခံ ကုသ ပေးမည်ဟုသိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 04:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရပ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစီးက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခု ပြင်ဦးလွင်မြို့ မန္တလေး- လားရှိုးလမ်းမကြီးအနီး နေမင်းဂျုံစက်နဲ့ mother love မူကြိုကျောင်းရှေမှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 04:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်ဦးရေ ၁ ဒသမ ၃၃ သန်းရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းတွင် ၁ ဒသမ ၀၈ သန်းရှိ
လက်ရှိ စာရင်းများအရ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်ဦးရေ ၁ ဒသမ ၃၃ သန်းရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းတွင် ၁ ဒသမ ၀၈ သန်းရှိကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများနှင့် မီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/30/2013 04:11:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 11:59:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများ ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ပြန်ဆင်းလာကြပြီ
တရုတ်အာကသယာဉ်မှူး ၃ဦးလိုက်ပါလာသည့် Shenzhou 10 အာကာသယာဉ်သည် အာကာသအတွင်း ၁၅ ရက်ကြာ အထူးလုပ်ငန်းတာဝန်များ
ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့် ကမ္ဘာမြေပြင် ပေါ်သို့ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ မြင်ခင်းပြင်ပေါ် သို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 10:48:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မလေးရဲယောင်ဆောင်မြန်မာတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 11:40:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှိ ဆိုင်တွေမှာ အုန်းရည်ကို သောက်သုံးလို့ ရပါသေးတယ်.. အုန်းရည်ဟာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 11:22:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
တစ်မျိုး မထင်ကြပါနဲ့ ခင်ဗျာ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ သေပြီဆရာ သီချင်းကို နားထောင်ရင် ဟိုလိုက်ညည်း ဒီလိုက်ညည်း ညည်းနေရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးရတာမို့ ရေးတဲ့ အချိန်နဲ့ အဲဒီစာသား ရောက်တဲ့ အချိန်က တိုက်ဆိုင် သွားလို့ သုံးလိုက် မိတာပါ။ အင်း... ပြောမယ့်သာ ပြောရတာ ပါလေ။ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကလည်း တိမ်တောင်လား၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 08:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 05:09:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဟိန်းထူးလင်း(ခ) ဘုန်းလျှံအား
မူးယစ်ဆေးဝါးများလက်ဝယ်ထားရှိသုံးစွဲမှု ဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 04:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 03:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သားသမီးပေါ်ညှာတာမှု့ မရှိနည်းလမ်းမကျထိမ်းသ်ိမ်းရက်စက်သောမိဘမောင်ဘွားတစ်ချို့ သတင်း
ရိုက်နှက်ခံရသော မနှင်းဝတ်ရည်၏ ဒဏ်ရာများကို တွေ့ရစဉ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2013 03:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကမ်းနားလမ်းနားနှင့် (၇)လမ်းထောင့်တွင် မြို့တော်စည်ပင်မှ လမ်းများတိုးချဲ့လျက်ရှိသော မြေများတူးဖော်နေသည့်နေရာတွင် ရေနံများ ထွက်ရှိနေကြောင်း မြို့တော်စည်ပင်မှ ယင်းနေရာသို့ ရောက်ရှိနေသော တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2013 08:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သာ လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် သမ္မတအဖြစ် ထပ်မံဆောင် ရွက်လိုပါက သူသည် အားကောင်း သောသမ္မတလောင်းတစ်ဦးဖြစ် လာလိမ့်မည်ဟု အမေရိကန်၏ ဩဇာကြီးမားသော အာရှ အသင်း ကြီးက ခန့်မှန်းလိုက်သည်။ 'မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကူးအ ပြောင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်း သိမ်းခြင်း၊ အရေးအကြီးဆုံးစိန် ခေါ်မှု ၁ဝချက်' ဟူသောခေါင်း စဉ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ယင်း၏ အစီရင်ခံစာ အခန်း(၂) '၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲသို့လှမ်းကြည့်ခြင်း'ဟူ သောသုံးသပ်ချက်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ကြိုတင်မှန်းဆခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2013 05:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကောလဟာလသတင်းနှင့် မိမိဘာသာကိုလူမျိုးကိုဘယ်လိုထိမ်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာသီတာဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့် ခွန်းဗွီဒီယို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2013 05:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ကို အသရေဖျက်တဲ့ ဗွီဒီယို ပြသမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲခံရသူကို မုံရွာခရိုင်တရားရုံးက တသက်တကျွန်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဒေါ်ခင်ရူပါ တင်ဆက်။ ရိုက်ကူး အိုင်စီဂျေ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2013 05:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/28/2013 05:14:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နော်ဝေမှ Telenor နှင့် ကာတာမှ Ooredoo တို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး တင်ဒါ အနိုင်ရရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် နော်ဝေ နိုင်ငံမှ Telenor ကုမ္ပဏီနှင့် ကာတာနိုင်ငံမှ Ooredoo ကုမ္ပဏီတို့ တင်ဒါ အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါ လိုင်စင် စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 11:11:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အိုလံပစ်နေ့ အကြို အမျိုးသား ကာယ ဗလ ပြိုင်ပွဲ နှင့် အမျိုးသမီး ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 10:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေး အတွက် မလေးရှားလ၀က အားဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်နိုင်ရန် USD 103340 အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 09:35:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
“ဘတ်စ်ကားခေါင်မိုးကိုကိုင်လျက် လေပေါ်ပျံသန်းပြသည့် ဒိုင်နမို၏ မျက်လှည့်စွမ်း”ဗွီဒီယိုဖိုင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 09:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မှတ်ချက် -ဒီပညာကိုဖေါ်ထုတ်ပေးပါ ကျနော်အလင်းရောင်ကြယ်လည်း။မစမ်းသပ်ရသေးပါ။အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားမရဖြစ်နေပြီး။ထပြီးစမ်းသပ်ရတော့ မလို၊ လက္ခံရတော့ မလိုဖြစ်နေ၍စမ်းသပ်ပြီးသူများအောင်မြင်ခဲ့ ယင်-ဟုတ်မှန်ပါက ချက်ဘောက်တွင်၎င်း-ကွန့် မက်တွင်၎င်း-အီးမေးလ်တွင်၎င်း စာရေးပြခဲ့ ပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 07:33:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အလေးချိန်၁၀ပိသာလောက်ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းလှံကြီးတွေ့ လို့ တဲ့ 
( Sea Game မှာ လှံပစ်ပြိုင်ဖို့)
မနေ့က ရေနီမြို့က ဦးစိုးညွန့်ဆိုတဲ့လူရောက်လာတယ်။
ပြီးတော့ ဒီဓါတ်ပုံပေးတယ်။ အခု လှံလိုလိုဘာလိုလိုဟာကြီးကရေတာ ရှည်မြို့နယ်၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 06:31:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေ ၂၅ ရက်မှ ဇွန် ၂၅ ရက်အထိ တစ်လတာ ကာလအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ စုစုပေါင်း ၅၅၉၅ ဦးရှိပြီး၊ ထိုသူများထဲတွင် CI မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဖြင့် ရောက်ရှိလာသူ ၅၄၁ ဦး ပါဝင်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရပါသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 06:14:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူအများကို ထူးထူးဆန်းဆန်းများဖြင့် အံ့ဩစေတတ်သူ ပဉ္စလက် ပညာရှင် ဒိုင်နမို (#Dynamo)တစ်ယောက် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်စေခဲ့ပြန်သည်။ #Pepsi ၏ ကြော်ငြာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည့် ဒိုင်နမိုသည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 06:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ကိုဘယ်သူတွေဘယ်လို သုံးလဲ?
နည်းပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသလို အနာဂတ် စီးပွားရေးစနစ်ဟာလည်း အင်တာနက်ကိုမှီငြမ်း အားကိုးလာပါတယ်၊ Facebook လို့ခေါ်တဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကြီးဟာ နိုင်ငံတကာ နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ တိုးတက်လာပါတယ်၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 05:35:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 04:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်မှာအခုကဲ့ သို့ လာရောက်ဆဲဆိုသွားသည်-အိုင်ပီကိုဘမ်း၍ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်
ကျနော်အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်ဟာ အေးချမ်းစွာဖြင့် အွန်လိုင်းသတင်းလေးတွေကို ဖတ်ရှု့ ဝေမျှရာ အခုကဲ့ သို့ -အတိုက်ခံတစ်ခုမှ-သူတို့ မကျေနပ်သော ဘာသာရေးများ ကျနော့် ချက်ဘောက်တွင်လာရောက်ဆဲဆိုသွားပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။သတင်းတစ်ခုဖတ်တယ်ဆိုတာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/27/2013 12:59:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေး အလားအလာများ ဖတ်ချင်စဖွယ်သတင်းစာမျက်နှာများ
ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ဘိုဖာမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှု၊ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်မှု၊ အရှေ့ တရုတ်ပင်လယ် ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု၊ လူအများ အပြားကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ် စေခဲ့သည့် စင်ဒီမုန်တိုင်း စသည့် ဖြစ်ရပ် များသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လာမည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အတွင်း၌ မည်သည့် အရာများ ဖြစ်ပေါ် လာမည်ကို အတိအကျ မသိရ သော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူ များက ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲ လာနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ များ၊ အဖြစ်အပျက် များကို ခန့်မှန်း ပြောကြား ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့၏ ခန့်မှန်းချက်များ အနက် မှ အချို့ကို ရေးသားဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဘာရှာအယ်လ် အာဆတ် ဦးဆောင်သည့် ဆီးရီးယား အစိုးရသည် လာမည့်နှစ် အတွင်း ပြိုလဲနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူ များက ပြောကြား ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်း စစ်သည် ယခု အခါ အချိန်ကာလ အားဖြင့် ၂၁ လကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိပြီး အစိုးရသည် ပြိုလဲခြင်း လမ်းစပေါ်သို့ ရောက်ရှိ နေပြီဟု အချို့က သုံးသပ် ထားသော်လည်း ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွင် လေယာဉ် မပျံသန်းရေး ဇုန် သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိပါက တစည်း တလုံးတည်း မရှိသည့် အတိုက်အခံ တပ်များ အနေဖြင့် အာဆတ်၏ တပ်များကို အလွယ်တကူ တိုက်ခိုက်နိုင်မည့် အနေအထားတွင် မရှိကြောင်း ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့် တိုက်ပွဲ များက သက်သေပြလျက် ရှိသည်။
အီရန် နျူကလီးယား အစီအစဉ်
ကျွမ်းကျင်သူများ ခန့်မှန်း ထားသကဲ့သို့ ဆီးရီးယား အစိုးရ ပြိုလဲ ခဲ့ပါက အီရန် နိုင်ငံသည် အနောက်နိုင်ငံ များ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို မခံသည့် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းရှိ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံ များသည် အီရန် အစိုးရအား ၎င်းတို့၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အင်အားသုံး ဖြေရှင်းမည်ဟု နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွပေး လာခဲ့သော်လည်း အီရန် နိုင်ငံသည် အနောက် အုပ်စု၏ ထောင် ချောက်ကို ရှောင်ရှား နိုင်ခဲ့သည်။
အနောက် နိုင်ငံများသည် နျူကလီးယား အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီရန်အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများ တိုးမြှင့်ချမှတ် ခဲ့သော်လည်း စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်မည် ဆိုပါက တတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားမည့် အလားအလာ ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် ဆီးရီးယား၌ အာဆတ် အစိုးရ ပြုတ်ကျ ခဲ့ပါက နိုင်ငံကြီး များ၏ ဖိအားသည် အီရန် အပေါ် တိုးမြှင့် ကျရောက် လာဖွယ်ရှိပြီး အီရန် အနေဖြင့် ယင်း ဖိအားများကို မဖြစ်မနေ ကာကွယ် ခုခံသွားမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ခုခံကာကွယ် မှုကို ရန်စခြင်း အဖြစ် အနောက် နိုင်ငံများက ဖော်ပြပြီး အင်အားကို အသုံးပြု လာဖွယ် ရှိသည်။ သို့သော် မေးစရာ မေးခွန်း တစ်ရပ်မှာ အင်အားကြီး နိုင်ငံများ ဖြစ်သော တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ တို့သည် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သော အီရန်အပေါ် ကျရောက်လာမည့် ဖိအားနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ မည်သို့မည်ပုံ တုံ့ပြန်မည်နည်း ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နှင့် EU တို့၏ စီးပွားရေး အလားအလာ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ စီးပွားရေးသည် ပြန်လည် နာလန် ထူလာဖွယ် ရှိပြီး ကုန်ထုတ်လုပ် ခြင်းသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နိုင်မည့် အလား အလာတွင် ရှိနေသည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံ၏ မြင့်တက်လာသည့် အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းသော စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အပေါ် များစွာ အခြေတည်လျက် ရှိသည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) နိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် ပေါ်တူဂီ၊ အိုင်ယာ လန်၊ အီတလီ၊ ဂရိနှင့် စပိန် နိုင်ငံများ၌ ကြွေးမြီ ပြဿနာများ၊ စီးပွားရေး အကျပ် အတည်းများ ပြန်လည်ကြုံ တွေ့ လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အီတလီ အစိုးရသစ် အနေဖြင့် စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှု များကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရဖွယ် ရှိသည်။ EU အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ အခွန်များကို တိုက်ရိုက် ကောက်ခံနိုင်ရေး အတွက် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာန တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ကြေညာခဲ့ပြီး EU ဇုန်ကို ဥရောပ၏ ပြည်ထောင်စု တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရန် လာမည့်နှစ် အတွင်း ကြိုးပမ်းသွားဖွယ် ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ လာခြင်း
ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲ လာခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အတွင်းတွင် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်း၊ ငလျင် လှုပ်ရှားခြင်း စသည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ ပိုမိုကြုံတွေ့ ရဖွယ် ရှိသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူ များက ခန့်မှန်း ထားသည်။ ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှုကြောင့် စိုက်ပျိုး သီးနှံများ ပျက်စီးရဖွယ် ရှိပြီး လာမည့်နှစ်၌ ကမ္ဘာ ကြီး၏ အနီးတွင် ကြယ်တံခွန်ကြီး နှစ်ခု ပေါ်ထွက် လာသောကြောင့် ၎င်း ကြယ်တံခွန်ကြီး များသည် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အပေါ် များစွာ အကျိုး သက်ရောက်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ပညာရှင် များက ပြောကြားထား သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများရှိ အစိုးရ အဖွဲ့များ အနေဖြင့် ပညာရှင် များ၏ ခန့်မှန်းချက်ကို အခြေခံ၍ သတင်း အချက်အလက်များ ဖလှယ်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားကြရန် အကြံပြု ထားသည်။
တရုတ် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး
တရုတ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှုန်းသည် ၂ဝ၁ဝ ပြည့် နှစ်မှစ၍ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျဆင်း လာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း ဝယ်လိုအား ကျဆင်းမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက် များသည် ထိရောက်မှု ရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုသည် ယခုအခါ ပြန်လည် အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာပြီး ခေါင်းဆောင် အပြောင်း အလဲကြောင့် လာမည့်နှစ် အတွင်း နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မြန်ဆန် လာစေရန် အစိုးရ သစ်က ပိုမို လုပ်ဆောင်သွားဖွယ် ရှိသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှုန်းသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိမည်ဟု ပညာရှင် များက ခန့်မှန်း ထားသည်။
အာဖဂန် နစ္စတန်သို့ အမေရိကန်တို့ ဦးဆောင်သည့် ပြည်ပ တပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက်ပြီး ၁ဝ နှစ် အကြာတွင် ပြည်ပ တပ်ဖွဲ့များသည် ဒေသခံအာဖဂန် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းများကို ပြန်လည်တည်ထောင် ပေးရာတွင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အောင်မြင် ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့များသည် အာဖဂန် ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များအား ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည် နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်တန်းများ ပေးအပ်လျက် ရှိသည်။ အာဖဂန် နစ္စတန်သည် အကြမ်းဖက် သမားများ၏ အဓိက ခိုလှုံရာ နေရာတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း တာလီဘန် များက ပြန်လည် အသွင်ပြောင်းရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိရာ သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်း အနေဖြင့် ပြည်ပတပ်များ နိုင်ငံ အတွင်းမှ ထွက်ခွာသွား ချိန်တွင် တာလီဘန်တို့၏ အန္တရာယ်ကို သတိ ကြီးစွာဖြင့် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ကာဇိုင်းအတွက် ရင်လေးစရာ အခြား အန္တရာယ်ကြီး တစ်ခုကား ရှိနေသေးသည်။ ယင်းမှာ အခြားမဟုတ် အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း အမြစ်တွယ် လျက်ရှိသည့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုပင် ဖြစ်သည်။
တောင်အာရှ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေး စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့် ရေးနှင့် စစ်တပ် ခေတ်မီစေရေး အစီအစဉ် များကို အဓိက ဦးစားပေး အဖြစ် အကောင် အထည်ဖော်လျက် ရှိသည် ကို တွေ့ရသည်။
စစ်လက်နက် ပစ္စည်း အသစ်များ တပ်ဆင်ရေး၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဆီနာသည် ယခု သီတင်းတစ်ပတ် အတွင်း ရုရှား နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ လက်နက် ဝယ်ယူရေး စာချုပ် တစ်ရပ်ကို ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်နှင့် လက်မှတ် ရေးထိုး ခဲ့သည်။
အဆိုပါ သဘောတူ စာချုပ်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ချိန်မှစ၍ ချုပ်ဆို ခဲ့သမျှ လက်နက် ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်များ အနက် တန်ဖိုး အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရသည် ဖရီးဂိတ်စ် စစ်သင်္ဘောသစ် များကို ရေတပ်တွင် တိုးချဲ့ အသုံးပြုခြင်း၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ အနီးရှိ ၎င်းတို့၏ ပိုင်နက် အတွင်း၌ လေတပ် အခြေစိုက် စခန်းသစ် တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း အပါအဝင် စစ်အင်အားကို မကြာမီ ကပင် တိုးချဲ့ တည်ဆောက်လျက် ရှိသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ များသည် စစ်ရေးနှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများတွင် ဆက်လက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ် ထားသည်ဟု အဆိုပါ လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ အခမ်း အနားတွင် သမ္မတ ပူတင်က ဝန်ကြီးချုပ် ဟာဆီနာကို ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သတင်းဌာန များက ဖော်ပြ ထားသည်။
လက်နက် ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေး သဘော တူညီချက် အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အနေဖြင့် သံချပ်ကာ ကားများ၊ ခြေလျင်တပ်သုံး လက်နက် ပစ္စည်းများ၊ လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး စနစ်များ အပါအဝင် Mi-17 သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ် များကို ဝယ်ယူ သွားမည်ဟု ရုရှား နိုင်ငံပိုင် လက်နက် ကုမ္ပဏီနှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောကြား ထားသည်။
ထို့အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရသည် အစောပိုင်း ကလည်း တရုတ် နိုင်ငံမှ တင့်ကားများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ရုရှား နိုင်ငံမှ စတုတ္ထ မျိုးဆက် တိုက်လေယာဉ် ဖြစ်သည့် MIG-29 လေယာဉ် များကို ဝယ်ယူရန် စီစဉ် ခဲ့သော်လည်း ဈေးနှုန်းမြင့် မား လွန်းသောကြောင့် လက်လျှော့ ခဲ့ရသည်ကို တွေ့ရသည်။
အလားတူပင် ရုရှား နိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အတွင်း၌ နိုင်ငံ၏ ပထမ ဆုံးသော နျူကလီး ယားဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တစ်ရုံ တည်ဆောက်ရေး အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ အကြား သဘောတူ လက်မှတ် ရေး ထိုး နိုင်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရသည် နိုင်ငံအတွင်း ကမ်းလွန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သိုက် များကို မကြာမီက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေး စွမ်းရည် တိုးချဲ့ရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ တစ်ချိန်တည်း မှာပင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင် များသည် အမေရိကန် နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ခိုင်မြဲစေရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိပြီး အမေရိကန် အစိုးရ၏ EDA အစီအစဉ် အရ အမေရိ ကန် ပြည်ထောင်စုမှ ပိုလျှံနေသည့် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို မဟာမိတ် နိုင်ငံ များသို့ ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာ ဖြင့် ရောင်းချမည့် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင် နိုင်ရန် မျှော်မှန်းလျက် ရှိသည်ဟု သုံးသပ် ရပါသည်။
အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ အကြား နယ်စပ် စည်းမျဉ်း ဖြတ်ကျော်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယင်းနိုင်ငံ အစိုးရများ အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ၍ အဖြေရှာရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့သော်လည်း တင်းမာမှုများမှာ တဖြည်းဖြည်းမြင့် တက်လာလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
အိန္ဒိယ အာဏာပိုင် များက ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အိန္ဒိယ အစိုးရ သည် တရုတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စခန်းချမှုကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ၎င်းတပ်များ စခန်းချရာမှ ၁၅ဝ မီတာခန့်သာ ကွာဝေး သည့် နေရာတွင် အိန္ဒိယ တပ်များကိုထပ်မံ ပြောင်းရွှေ့ ချထားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် နှစ်နိုင်ငံကို ပိုင်းခြားထားသည့် နယ်ခြား စည်းမျဉ်းကို ဖြတ်ကျော်၍ အိန္ဒိယပိုင်နက် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည် ဟူသော အိန္ဒိယ အစိုးရ၏ ပြောကြားချက်ကို တရုတ် နိုင်ငံက ငြင်းဆို ခဲ့ရုံသာမက တရုတ် တပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်နက် နယ်နိမိတ် အတွင်း၌သာ ကင်းလှည့်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာမှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဟွာချွမ်ယင်းက ပြန်လည် ချေပ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုမျှသာမက အိန္ဒိယ စစ်တပ်သည် တရုတ် နယ်စပ်တွင် ''ရန်လိုသည့် ကင်း လှည့်ခြင်းမျိုး''ကို လုပ်ဆောင် ခဲ့သည်ဟု တရုတ် နိုင်ငံက ပြန်လည် စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်မှုများအား ရပ်တန့်ပစ်ရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံအား တောင်းဆို ထားခဲ့ သည်။
ယင်းကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင် ကန့်ကွက်ရန် အတွက် အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရန်ဂျန် မာသာအီက အိန္ဒိယ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီးအား ဆင့်ခေါ်၍ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့အတူ အဆိုပါ နယ်စပ် အငြင်းပွား မှုကို ဖြေရှင်းရေး အတွက် အင်အားသုံး ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်း အပါအဝင် အခြား ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကို စစ်တပ်က အိန္ဒိယ အစိုးရထံ တင်ပြခဲ့သည့် အပြင် စစ်တပ် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဘီကရမ်ဆင်း ကိုယ်တိုင် ကက်ရ်ှမီးယား ဒေသ သို့ လေယာဉ်ပျံဖြင့် သွားရောက်၍ ဒေသတွင်းရှိ တပ်မှူးများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အလားတူပင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် နည်းလမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြု၍ မိမိတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်သွားမည်ဟု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး အေကေအန်ထော်နီ က အစောပိုင်းတွင် သတိ ပေးထားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် ကက်ရ်ှမီးယား ဒေသတွင် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ် အငြင်းပွား မှုတွင်လည်း အလားတူ ရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တို့သည် နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုကြောင့် ဟိမဝန္တာ ဒေသများဖြစ်သည့် လာဒက်နှင့် အာရွန် နာချာပရာဒက်ရ်ှတို့တွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အတွင်းက စစ်ပွဲ ဆင်နွဲခဲ့ကြပြီး ယင်းနောက်တွင်လည်း နယ်စပ်အရေး ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ၁၅ ကြိမ်ခန့် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးခဲ့သော်လည်း အငြင်းပွားမှုကို အပြီးတိုင် ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ယခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အိန္ဒိယ- တရုတ် နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုသည် အာရှဒေသတွင် ကြီးထွားလာသည့် တရုတ် နိုင်ငံ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ယှဉ်နိုင်ရန် အတွက် အမေ ရိကန် အစိုးရက''အာရှဒေသ ဗဟိုပြုရေး'' မူဝါဒကို အကောင် အထည်ဖော်ရန် ကြိုးပမ်းနေစဉ် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့သည် ''မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းရေး'' အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်၍ တရုတ် အစိုးရ၏ အင်အား ကြီးထွားလာမှုကို တန်ပြန်ရန် ရည်ရွယ် ထားလျက် ရှိသောကြောင့် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ က ခေါင်းအေးအေး ထား၍ ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်မည်ဟု သုံးသပ်ရပါ သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 07:11:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အင်တာနက်ပေါ်မှတွေ့ ရှိရသောဦးဝီရသူ အားရေးသောတိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းအကြောင်း
ဒီအပတ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ဝေမယ့် တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကို စောင့်မျှော်နေခဲ့မိပါတယ်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းဟာ အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေပြီး ရက်စွဲကို တစ်ပတ် ကြိုတင်ရိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီအပတ်ရဲ့ ရက်သတ္တပတ်အစနေ့ဟာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 06:58:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်မြင့်အမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်းအပိုင်းစ
ဖြိုချလိုက်တဲ့ ဆုထူးပန်ရုပ်ရှင်ရုံ မြေနေရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အငြင်းပွားမှုကြီးအကြောင်း ဒီနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၄ မှာ တမျက်နှာပြည့်ကြော်ငြာ တွေ့ရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 06:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 05:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖေ့စ်ဘုတ်မှတွေ့ ရသောကျောက်ဖြူ - ကူမင်း ရေနံပိုက်လိုင်းအကြောင်း(ဟုတ်၏မဟုတ်၏)
ကျောက်ဖြူ - ကူမင်း ရေနံပိုက်လိုင်းကတော့ လူမသိ သူမသိ ဖောက်လုပ်ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ...... အစမ်းပို့လွှတ်မှုပြုမယ့် ပီးခဲ့တဲ့ မေလ မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒီကိစ္စကို သတိပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးစွာနဲ့ အွန်လိုင်းမှ ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်...... ကျောက်ဖြူ - ကူမင်း စီမံကိန်းဟာ ရေနံပိုက်လိုင်း၊ ဂက်စ် ပိုက်လိုင်းသာမကပဲ ယှဉ်တွဲလျက် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းလည်း ပါဝင်နေတာကို သတိပြုမိဖို့ လိုပါတယ်......
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 05:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဝင်း၏ တောင်ဘက်တံခါးပေါက်တွင် ယခုလ ၂၅ ရက်နေ့ မွန်းလွှဲ ၂ နာရီ အချိန်ခန့်က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး စီးနင်းလာသော ကားရှေ့၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ အသက်အသေခံမည်ဟု ဆိုကာ ၀ပ်စဉ်းလျက် လမ်းပေါ်တွင်အိပ်နေခဲ့ကြောင်း ဆေးရုံဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 05:34:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နယ် တာချီလိတ်-မိုင်းဆတ် လမ်းမကြီး ဖက်ယိတောင်ကုန်း အဆင်းတွင် ဆွမ်းစားပြန်လာသော သံဃာ ငါးပါးနှင့် လူတစ်ဦး လိုက်ပါလာသည့် ယာဉ်သည် ဇွန်လ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က အရှိန်လွန်ကာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 05:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ကပဲ အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လူတွေ အသက်ရှင် နေထိုင်လို့ ရနိုင်မယ့် တစ်နည်းဆိုရလျှင် လူတွေ အသက်ရှင် နေထိုင် နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မယ့် ကမ္ဘာနှင့် အလားတူသော
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 05:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မင်းသမီး ဓာတ်ပုံကို အင်းချမီးရှို့ရာကနေ စတဲ့ဇာတ်လမ်း တရားရုံးကို ဆက်မည်
အင်းအိုင်၊ လက်ဖွဲ့၊ အောက်လမ်း စတဲ့ နည်းပညာတွေဟာ အခုလို အင်တာနက်ခေတ်သိပ္ပံခေတ်ကြီး မှာလည်း အသုံးပြုနေဆဲ ဆိုတာ သိရတော့ မြန်မာဗီဒီယို ကားတွေမှာ သိုက်သမိုင်းတွေ၊ သရဲကားတွေ၊ နာနာဘာဝတွေ ရိုက်ပြနေကြတာလည်း အံ့သြစရာ မရှိတော့ဘူးပေါ့လေ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 03:52:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘာသာတရားကို ကာကွယ်ခြင်းမှာ ယုံကြည်မှုသာ အဓိကဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇွန် ၂၅ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခေတ္တရပ်နားချိန်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံ ရာတွင် ပြောကြားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/26/2013 02:35:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကြံ ရွယ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး အား လေကြောင်း
ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ အရေးပေါ် စစ်ဆေးဆောင် ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း
လေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/25/2013 11:22:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပုဇွန်တောင်ချောင်း အတွင်း ငမိုးရိပ်မိချောင်း တစ်ကောင်အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရေလုပ်သားများမှ ဖမ်းမိခဲ့၊
ရန်ကုန်မြို့ ပုဇွန်တောင်ချောင်းအတွင်းရှိအရှည် ၁၀ပေ၅လက္မလုံးပါတ်၎ပေနှင့် ၃လက္မ
ရှိသော ငမိုးရိပ်မိချောင်းတစ်ကောင်အား ဒီနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ သည်ဟုသိရပြီး
အဲဒီမိချောင်းကို ပုဇွန်တောင်ချောင်း ရေတပ်အမှတ် ၃၆တန်၄၀၀သင်္ဘောနားအနီးရေလုပ်သားများတွေ့ ရှိခဲ့ ပြီး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/25/2013 11:14:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းမလျာ အလှပြိုင်ပွဲ ဗီဒီယို ...
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲ...
ရှမ်းလူမျိုး၂ဦးအား KIA အဖွဲမှ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်...
ထိခိုက် ဒဏ် ရာရရှိပြီး မ လေးရှားမှပြန်လည်ရောက် ရှိ...
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်ဦးရေ ၁ ဒ...
တရုတ် အာကာသယာဉ်မှူးများ ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ပြန်ဆင်းလာ...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မလေးရဲယောင်ဆောင်မြန်မာတစ်ဦး ဖမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ကို အသရေဖျက်တဲ့ ဗွီဒီယို ပြသမှုကြော...
နော်ဝေမှ Telenor နှင့် ကာတာမှ Ooredoo တို့ မြန်မာ့...
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အလေးချိန်၁၀ပိသာလောက်ရှိတဲ့ ရှေးေ...
Facebook ပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား သေးသိမ်အောင် ဘာသာရေး ...
အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်မှာအခုကဲ့ သို့ လာရောက်ဆဲဆိ...
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး၊ စီး...
အင်တာနက်ပေါ်မှတွေ့ ရှိရသောဦးဝီရသူ အားရေးသောတိုင်းမ်...
ဒေါ်ဝါဝါဝင်းရွှေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဦးကျော်မြင့်အမှု နော...
ဖေ့စ်ဘုတ်မှတွေ့ ရသောကျောက်ဖြူ - ကူမင်း ရေနံပိုက်လိ...
ဆွမ်းစားပြန် သံဃာများ စီးလာသည့်ယာဉ် ပေ၂၀၀ကျော် ချေ...
မင်းသမီး ဓာတ်ပုံကို အင်းချမီးရှို့ရာကနေ စတဲ့ဇာတ်လမ်...
ပုဇွန်တောင်ချောင်း အတွင်း ငမိုးရိပ်မိချောင်း တစ်ကေ...
၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ပညာသ...
ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည် တို့မြန်မာပြည် ဒါတို့တိုင်းတ...
မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေ ဆုထူးပန်တာဝါကို Fatherlan...
Miss Diamond Queen 2013 ပြိုင်ပွဲသို့ အမျိုးသားမှ ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းအား...
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ကိုဇော်ဝင်းထိုက် ရ...
" လူလိမ်လူညာများ ဖွင့်လှစ်ထားသော Aroma Zulu Studio...
မြန်မာလုပ်သား ၂၀ ဦးနှင့် ဒုက္ခသည် ၆၅ ဦး မြန်မာပြည်သ...
“ ဒကာမကြီးဒေါ်ရွှေဇီးကွက်သို့..အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ”
ဟောဒီမှာလာပြန်ပြီတစ်ခု-မသိသကျော်သွား သိသူဖေါ်စား ရ...
ကြာဇံဟင်းခါးနှင့် ရှောက်သီးသုတ်လုပ်စားမယ်-သို့ -စီ...
ဒီတစ်ခါသူဘာပြောလည်းနားဆင်ကြည့် ပါ- ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှကလေးအမေ ကလေး ( ၁၁ နှစ်သမီး အရွ...
ဒီနေ့ ၂၃-၆-၂၀၁၃ အင်ဒိုနီးရှားတောမီးလောင်မှမီးခိုးေ...
ထူးထူးခြားခြားထောင်ကို ခြင်ထောင် မှတ်သူတဲ့ လူသား
သတင်းတွေဖတ်ရတာများလာတော့ ပျင်းမှာစိုးလို့ -ကိုကိုတ...
ကမ္ဘာပေါ် တ၀ှမ်းမှ အင်တာနက် မရရှိသည့် ၅ ဘီလီယံကျော် ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသော မူးယစ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဆိုးသွမ်းနေသောအခါ (တိုက်ရိုက် ဘာသာ...
တိုင်းမ်းမဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး ရေးသားချက် ဆ...
ခန့်မှန်း ပျူခတ်လက်ရာ ရွေ ၁၆ကျပ်သား လက်ကောက်တွေ့ရှ...
လှချင်၍ ဆံပင်ဆေးဆိုးရာမှ မျက်လုံးကွယ်၍ မျက်နှာအလှပ...
လူသားခြင်းမစာနာနိပ်စက်တဲ့ ---သွားလေအုန်းတော့ မမေဇွ...
မလေးရှားရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေ...
လက်ထိပ်တန်းလန်းနှင့် အမျိုးသမီးအလောင်း ငဝန်မြစ်အတွ...
ကျည်ဆန်ခွံများဖြင့် သွန်းလုပ်ထားသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတေ...
မလေးရှားနိုင်ငံ၌ စာချုပ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေရသော မြန်...
မြန်မာနှိုင်ငံရဲ့ တချို့ ဥပဒေမဲ့ရက်စက်ယုတ်မာမှူ့...
UWSA “ ၀” အဖွဲ့မှ မြေထိုးစက်ဖြင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသ...
သရုပ်ဆောင် မေဇွန်ကို လူသတ်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၉နှစ်ကေ...
မြန်မာ အလုပ်သမားများ ဌာနေပြန်ခွင့်အတွက် လာဘ်ယူမှုတွ...
မလေးရှားနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ ပျံသန်းမှု့ လေေ...
မြန်မာနိုင်ငံသား ၁ဝဝ ကျော် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ အဖမ်းခံ...
မလေးရှားကန့် ထဲကိုအိုဗာစတေးနဲ့ အဖမ်းခံရောက်နေရတဲ့ ...